Post by Shirkadda Telesom oo Samaysay Qiima-dhimistii Ugu Weynayd Ee Soo Jiidata Dareenka Bulshadda iyo Barnaamijka Abaal-marinta Ee Aroos wacan, Jul 29, 2020.
HARGEYSA (TELESOM)– Shirkadda Isgaadhsiinta casriga ah ee Telesom ayaa daah-furtay adeegyadda KAAFIYE iyo AROOS WACAN, kuwaas oo noqonaya adeegyo ay bulshaddu si weyn baahi ugu qabeen oo lasoo bandhigay xlli ay ku habboonayd.
Munaasibad daah-furka shirkaddu kusoo bandhigtay adeegyadan, ayaa lagu qabtay xarunta shacabka Magaalada Hargeysa ee shirkadda Telesom ku leedahay halkaa.
Adeegga KAAFIYE , oo ah adeeg qiima-dhimistii ugu balaadhan lagu sameeyey, waa ku hadalka iyo dirista fariimaha gaagaaban. Adeeggan ayaa macmiilka u sahalaya inuu bishan oo dhan ku haddlo lacag dhan $7. toddoba dollar oo keliya.
Maamulaha Suuq-geynta ee Shirkadda TELESOM Cabdiraxmaan Aar ayaa sharaxaad ka bixiyey adeegga KAAFIYE. Adeegan oo qofku kaga shuban karo adeegga ZAAD, isagoo isticmaalaya qaybta dollar-ka, *808# ka dibna dooranaya KAAFIYE, halka uu shilling-kana kaga shuban karo *202#.
Agaasimaha Horumarinta Arrimaha Bulshadda ee shirkadda TELESOM Cabdiwahaab Maax oo sharaxaya abaal-marinta ayaa yidhi, “Barnaamijka AROOS WACAN waa barnaamij loogu talo-galay in lagu taageero dhalinyaradda aan wali guursan ee u baahan inay qoys dhisaan. Barnaamijkani wuxuu bartilmaameedsan doonaa lixda bilood ee ka hadhay sannadka, in la dhiso 30 qoys ama 60 lamaane oo laga bixiyo kharashka arooska oo uu ugu muhiimsan yahay in loo iibiyo agabka guriga oo dhan, in laga bixiyo kiradda guriga oo lixda bilood ah iyo waliba in loogu daro masaariif lixda bilood ah”.
Haddaba barnaamijkan Abaal-marinta AROOS WACAN oo ah mid aannay wax shuruud ah ku xidhnayn, waxaa lagaga qayb-gali karaa habka fariimaha gaagaaban, waxaanu qofku fariin ah “AROOS” u dirayaa lambarka gaaban ee “111” fariintuna waa mid bilaash ah.
Adeegyada Shirkadda Telesom soo bandhigtay maanta oo si weyn markiiba ay Bulshadu ugu riyaaqday, isla markaana si weyn usoo jiitay shucuurta Bulshada Somaliland, ayaa markii ay maqleen inta badan dadka isticmaala baraha Bulshaddu waxay muujiyeen sida ay ugu faraxsan yihiin tallaabooyinka adeegyadda cusub ee shirkaddu, iyadoo Shirkaddu doonaysa in ay raali-geliso mar walba macaamiisha iyo bulshada ay u addeegto.
Shirkadda Telesom oo Wacdaro Ka Dhigtey Carwadda 9-aad ee Rugta Ganacsiga Somaliland
Aroos Wacan Qaybtii 3aad
Telesom Group oo qiimo kaabis dhan 70% ku samaysay haamaha 6kg ee Somgas
Telesom oo maalgalin u samaysay dhalinyaro fikrado ganacsi la yimid
Sannad guuradii 7aad ee Mashruuca Caruurta la nool xanuunka macaanka
Telesom oo Lacag ku wareejisay Kooxda Kubadda Cagta ee gobolka Daadmadheedh
Shirkadda Telesom oo deeq $20,000 oo Dollar ugu deeqday Maktabadda Qaranka ee Gabiley
Shirkadda Telesom oo casho sharaf u samaysay kooxda Daadmadheedh
SOMALILAND ICT CONFERENCE 2020
Copyright © 2021 Telesom. All Right Reserved